Ugari neInvestment yeBulgaria uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Services muBulgaria kune:
● Kugara nekudyara muBulgaria
● Ugari nekudyara kubva kuBulgaria
● Visa yegoridhe muBulgaria
● Pasipoti yechipiri kubva kuBulgaria
● Ugari nekudyara kweBulgaria nekudyara muzvivakwa
Best Vamiririri veCitizenship neInvestment muBulgaria uye Magweta e Ugari neInvestment muBulgaria uye ma broker e real estate Citizenship zvirongwa muBulgaria zvinoshanda pamwe chete kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veBulgaria inopa masevhisi ekugara nekudyara muBulgaria, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Citizenship yechipiri nekudyara muBulgaria, Citizenship mbiri nekudyara muBulgaria, ugari uye ugari nekudyara muBulgaria. , Citizenship yekusingaperi nekudyara muBulgaria, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Residency nekudyara muBulgaria, Residency nezvirongwa zvekudyara muBulgaria, Residency nehurongwa hwekudyara muBulgaria, wechipiri Kugara nekudyara muBulgaria, hunyanzvi hwekugara nekudyara muBulgaria, pekugara uye kuva mugari nekudyara muBulgaria, kugara uye ugari nekudyara muBulgaria, zvirongwa zvehupfumi zvehupfumi muBulgaria, Residency nehurongwa hwekudyara muBulgaria, Residency nehurongwa hwekudyara muBulgaria, wechipiri. pasipoti i n Bulgaria, mapurogiramu epasipoti echipiri muBulgaria, chirongwa chechipiri chepasipoti muBulgaria, pasipoti yechipiri muBulgaria, pekugara uye pasipoti yechipiri muBulgaria, repasipoti repasipoti repiri muBulgaria, repasipoti repiri nekudyara muBulgaria, yechipiri ugari pasipoti muBulgaria, yechipiri pasipoti chirongwa muBulgaria, yechipiri pasipoti zvirongwa muBulgaria, visa yegoridhe muBulgaria, visa dzegoridhe muBulgaria, zvirongwa zvegoridhe vhiza muBulgaria, chirongwa chendarama vhiza muBulgaria, yechipiri vhiza vhiza muBulgaria, chirongwa chechipiri vhiza yegoridhe muBulgaria, mbiri vhiza vhiza muBulgaria, ugari hwemo uye vhiza yendarama muBulgaria, kugara uye vhiza yegoridhe muBulgaria, mugari vhiza mugari muBulgaria, chirongwa chendarama vhiza muBulgaria, zvirongwa zvendarama visa muBulgaria.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muBulgaria nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muBulgaria yeU Citizenship nekudyara: EUR 1,024,000
Nhanganyaya Bulgaria uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveBulgaria
Bulgaria inyika inofadza. Makomo anopenya, uye nzvimbo dzekushamisira ski hazvishamise hapana chinhu chekugodora kune imwe nyika yepasi. Iko kune toni yehunhu hunhu hwevanogadzira pano. Iwe unogona kuona midziyo inowanikwa kutengwa pamativi emigwagwa uye mune chero ripi zvaro remaguta. Kudya kunorimwa kubva pasi kunowanikwa kutengwa kwese kwese uye ndiko kunonaka. Kupisa kwezhizha uye kutonhora kwechando. Winters inogona kunge iri pasi - 15. Mazhizha anogona kubata makumi matatu nemashanu kana makumi mana mune mamwe matunhu akaita sePlovdiv nekumaodzanyemba kweBulgaria. Chimwe chinhu chinoisa Bulgaria pamepu ndiwo mahombekombe egungwa ane jecha, uye tembiricha yemvura inodziya yeGungwa Dema munguva yekupera kwechirimo, mahombekombe egungwa anogona kuchinja kubva pamitsetse yemahombekombe inovhuvhuta uye yemitambo kuenda kunzvimbo dzakadzikama uye dzakanaka dzemisasa.
Bulgaria inogona kukupa iwe kusangana kwakasiyana kwakasiyana uchivimba nekuti unogara mune rimwe remaguta madhorobha, kana mumataundi akareruka nemataundi. Panguva iyo vanhu vanoratidza madhorobha eBulgaria, vanoratidzira "ponyori nerori" mhando yemataundi. Pakati pemitsara iyi, ita shuwa kuti iwe uchararama mumhando iyi yemamiriro ekunze kana uchinge uchifunga nezvekuvapo kwekumaruwa muBulgaria, chero nzira yausingazove uri kure nevamwe vese kune vakawanda vekare-patsva vanotora nzvimbo idzi uye vanokoshesa Rutivi rwakanaka rwehupenyu hwakajeka, kune matunhu padhuze neVeliko Tarnovo, Dobrich, uye Elhovo kungo tarisa kune vaviri, vane nzanga dzakakura kwazvo. Huwandu hweBulgaria huri kuderera nekukurumidza.
Iwo mairi maviri akakosha madhiraivha eiyi fiasco kutama (vanhu vazhinji vakasiya Bulgaria kubva pakuwedzera kuenda kuEuropean Union), vachitsvaga mamiriro ari nani ekushanda, uye vachishandisa mukana wekusimudzira. Bulgaria ine Net kushomeka kwemumwe munhu senge wachi wachi. zvirokwazvo, kunyangwe kuongororwa kubva kuEurostat kwakataura kuti zvinogona kufungidzirwa kuti huwandu hweBulgaria hunogona kurasikirwa nemamwe mamirioni vagari muna 2050 uye vave pasi pe6.000 000.
Mhenderekedzo dzegungwa pamwe neBulgaria Gungwa Dema mhenderekedzo dzinogona kuve mumahotera, ayo anowanzo kurongedzwa mukati memwaka wakakwira (Chikunguru-Nyamavhuvhu), zvisinei, pakati pevanodzokera kumashure, unogona kuwana mafukidziro emahombekombe egungwa ayo anokukanganisa, kutora nguva yakawanda sezvazvinodiwa kutora rwendo nekukurumidza uye uone rudzi, iwe uchachida! Kufamba mukati merudzi kazhinji kwakareruka nekuti zvese zviri padhuze nepadhuze, rwendo Sofia-Varna (imwe yeanotsaurwa zvakanyanya kufamba ingori makiromita mazana mana chete.) Uye kune dzimwe nendege mbiri dzinoona madhorobha maviri ari pasi Maminitsi makumi matanhatu.
Chero zvazvingaitika, pane mukana wekuti iwe ungade kuda iyo inoshamisa chiitiko uye uve nemukana wakaringana, iwe unogona kutora zvine mwero chitima manejimendi, unogona kupfuura kubva kumakomo kuenda kuGungwa Dema remahombekombe mumaawa akati wandei nepakati pe, uchawana mipata inofadza. Chikafu nekumwa zvine mwero uye zvinobatsira mune chiitiko chekuti hausi werudzi rwakanyanya. Mazhinji maresitorendi anodya zvekudya zvakakura pakati pa12-2 pm uye iwe unogona kuwana yakasarudzika yeanosvika mashanu-5 maruva. Espressos yakanyanya kudhura pano kupfuura mune yakasara yeEurope. Unogona kuenda kuimba yepamusoro yekofi kuenda kutanga kwezuva kweespresso uye inodhura 6 leva. 2.00 Euro. Iwe unogona zvakare kuwana brew ye1 leva nezve Euro.
MaBulgaria inyika inofara kwazvo. Nyika iyi yakagadzwa muna 681 AD zvakare, yakatsungirira zvinhu zvausingafungidzire, ivowo ndivo vanogadzira tsamba dzeBulgaria kuitira kuti panguva iyoyo ikure kune vazhinji venyika dzeSlavic, ivo vane zuva rekurumbidza. tsamba dzeBulgaria dzakateedzana uye tsika, zviri pa24 Chivabvu, iwe uchaona understudy inotora migwagwa neyavo motorcade. Vazhinji vechidiki vanoraira maBulgaria kazhinji uye vanotaurirana muChirungu uye vanobatsira uye mufaro kuva padhuze. Zvizhinji zvezvakadzidziswa zveBulgaria zvinoshanda muIT uye kugovera nzvimbo iyo yakakura kwazvo pano. MaBulgaria anozivikanwawo neayo IT kugona.
Ivo vanowana muripo wakanakisa wavanogona kugara pano mushe mushe mushe, kunyanya muchiitiko chekuti vobva vasvika kure kusangano kubva kunze kwenyika. Bulgaria ine inokurumidza kumhanya padandemutande papuraneti, iwe unowana chinoshamisa chinokurudzira chemari. Iyo ine mwero zvakanyanya, zvakare yakavimbika, uye zvakasarudzika kure nekure. Chimwe chezvinhu zviri kuseri kwekugovezve kubudirira. Masaga emafoni ane mwero makumi maviri neshanu leva unowana mafoni asingagumi kumasangano ese ane GB internet. Bulgaria inzvimbo inoshamisa yekugara kana usiri mutete uye kunyanya wakakura pane mukana wekuti iwe ubhadhare kubva kunze kweBulgaria, semuenzaniso, gore, kana kushandira sangano rekunze, zvirokwazvo inzvimbo inonakidza kutanga mhuri uye nzvimbo inosarudzika kuti urarame pamusoro pe25% yenyika.
Zvekutanga ruzivo rwe Citizenship neInvestment yeBulgaria
Chishoma kudyara kwe Ugari nekudyara muBulgaria
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Bharugeriya
Ugari nekudyara kweBulgaria
D vhiza kadhi yekugara zvachose
Processing nguva yeU Citizenship nekudyara kweBulgaria
Mushure mekubata PR kwegore rimwe
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veBulgaria
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweBulgaria
€ 250,000 mubhizinesi bhizinesi (kungogara kwekugara kwenguva pfupi)
€ 512,000 Bhizinesi capital / Hurumende zvisungo (PR yakapihwa nekukasira)
€ 1 mamirioni Bhizinesi capital / Hurumende zvisungo (Ugari mushure memakore 1-2 pasi pekutsanya)
€ 300,000 muzvivakwa (kungogara kwenguva pfupi)
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweBulgaria
Bulgaria inhengo yeEuropean Union uye ichave nhengo yeSchengen zone munguva pfupi iri kutevera. Nekudaro nyika inopa iyo inofadza visa chirongwa. Ugari hweBulgaria hunogona kukupa iwe kodzero yekufamba-famba kutenderera Europe usina vhiza. Mushure memakore maviri ekugadzirisa nguva iwe unozogona kunakirwa nezvakanaka zvekugara zvachose muBulgaria. Zvakanakira izvi zvinosanganisira mitero yakaderera, kusvika kumusika weEuropean Union uye zvimwe zvakawanda. Kuti uwane chizvarwa cheBulgaria haufanire kuziva mutauro kana wega zvivakwa. Mushure mekuwana ugari hweBulgaria iwe unogona kufamba nyore uye kugara mune chero eEU nyika.
Kufamba kwemhuri muBulgaria
Iwo mabhenefiti anounzwa nekuva mugari weBulgaria unounza zvakare anoshandiswa kune vako vemhuri kusanganisira murume / mukadzi wako nevana.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muBulgaria insite
Iwe unotanga kuva pekugara zvachose kusvika pamwedzi mipfumbamwe. Munguva iyoyo iwe unofanirwa kushanyira Bulgaria kaviri uye iyo Bulgarian Consulate iri munyika mako. Mushure mekugadzirira kwefaira rako, iwe unozofanirwa kutumira mari yekudyara yeBGN 1 mamirioni (EUR 512,000). Kana chitupa chekudyara kwako chikapihwa unogona kunyorera yeD mhando yeVisa. Paunotora vhiza yako, unoshanyira Bulgaria uye wotumira kunyorera. Inotevera nguva yaunoshanyira kuti utore yako yekugara kadhi.
Mushure mekugara zvachose kwegore, unogona kunyorera kuti uve mugari nekuwedzera mari yeBGN 1 miriyoni (EUR 512,000)., Iyo mari inokwanisa kuve dhipoziti muzvisungo zvehurumende, kana iwe unogona kuisa mari mubhizimusi rinotenderwa nehurumende. Hugari hwehukama hunogona kuwanikwa mumakore maviri.
Mari inodiwa yeBulgaria
Unofanirwa kuisa BGN 1 miriyoni (maAppr. EUR 512,000) muHurumende yeBond Portfolio kwenguva yemakore mashanu. Mushure memakore mashanu, iyo yakazara mari inodzoserwa, zvisinei pasina zvido. Mari inodiwa inogona kupihwa mari kunyangwe iri European bank.
Zvekutsvaga -kukurumidza-track mugari kudyara kweBGN 1 miriyoni (appr. EUR 512,000) inodiwa. Iko mari inofanirwa kuchengetwa kwemakore maviri. Iko kudyara kunogona kuve kungaiswa muHurumende Bond Portfolio kana mune bhizinesi rinofanirwa kutenderwa nehurumende yeBulgaria.
Chikumbiro chekuva mugari wenyika chine mubhadharo weEUR 7,500. Nhengo dzemhuri dziri pasi pemari yekuwedzera. Iyo yekubhadharisa fizi yekugara uye kugara mugari chirongwa iri EUR 25,000. Kuwedzera, EUR 2,500 inofanirwa kubhadharwa kumwana asiri 18 zvisati zvaitika.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweBulgaria
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eBulgaria uye Citizenship ne Investment Lawyers yeBulgaria inopa vatengi uye mhuri dzavo muBulgaria nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuBulgaria, kugara nekudyara kubva kuBulgaria uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haangogumirwi ekugara nekudyara kubva kuBulgaria kana Golden Visa kubva kuBulgaria kana ugari hwekudyara kubva kuBulgaria kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuBulgaria, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Bulgaria kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muBulgaria uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuBulgaria uye kugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veBulgaria:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeBulgaria, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeBulgaria, inokwanisika kudhara mari yekupinda kune dzimwe nyika kukumbira kuBulgaria, Citizenship inodhura nevezvekudyara varidzi veBulgaria, inokwanisika Citizenship nemagweta ekudyara eBulgaria uye inodhura yekushambadzira yekushandira firm yeBulgaria.
Ugari nekudyara kubva kuBulgaria kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muBulgaria kune 37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuBulgaria kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuBulgaria kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuBulgaria.
Goridhe visa zvirongwa muBulgaria kune 37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuBulgaria kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuBulgaria kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuBulgaria kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeBulgaria kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muBulgaria nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka pane kudyara muBulgaria, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kuBulgaria. Isu tinosungirirwa nevashoma vashambadziri vezvivakwa muBulgaria vane rekodhi rekodhi uye zvivakwa zvavo zviri munzvimbo dzakanaka muBulgaria, vachitora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveBulgaria nemari yekudyara muzvivakwa muBulgaria.
Unoda kuziva - Bulgaria Citizenship neInvestment
Ugari neInvestment Gweta reBulgaria rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuBulgaria. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuBulgaria inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuBulgaria kana kuenda kuBulgaria, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweBulgaria kune vatengi kuti vawane Citizenship yeBulgaria uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kweBulgaria, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kweBulgaria isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Zvizvarwa zvemo nekudyara kunyorera kweBulgaria. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweBulgaria uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweBulgaria zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveBulgaria.
Kamwe chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweBulgaria chikatenderwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muBulgaria kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muBulgaria:
Citizenship nebasa rekudyara kweBulgaria hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera maoko nezvombo kubva kana kuenda kuBulgaria.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveBulgaria hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muBulgaria kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuBulgaria.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweBulgaria hadzipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muBulgaria.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeBulgaria haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muBulgaria.
Citizenship nebasa rekudyara kweBulgaria haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muBulgaria.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweBulgaria haruwanikwe kune vanhu veBulgaria inobata mukutengesa, kuchengetedza muBulgaria, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeBulgaria haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeBulgaria haisi yezvitendero zvechitendero uye masangano avo muBulgaria.
Citizenship nebasa rekudyara mu Bharugeriya haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muBulgaria.
Ugari Hwedu magweta muBulgaria haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muBulgaria.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veBulgaria neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekuramba chero kupi zvako kubva kuzviremera muBulgaria kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara muBulgaria.
Ugari nekudyara muBulgaria nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa hukuru hwehukama nerutsigiro rwekudyara muBulgaria yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muBulgaria.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakavanzika ruzivo uye mari yeBulgaria, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Hugari nevekudyara masevhisi eBulgaria inopa mitengo yakachipa, ine chinzvimbo chinobudirira cheBulgaria.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuenda kuBulgaria inotsigira vatengi uye mhuri dzavo kuBulgaria.
Ruzivo rweHurumende nevekudyara kukumbira veBulgaria nevamiriri vepamutemo veBulgaria vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakira magweta nevamiriri veBulgaria kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pehukama hwako hweBulgaria uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuBulgaria
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Bulgaria, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuBulgaria inokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuenda kuBulgaria
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweBulgaria ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veBulgaria, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nehurongwa hwekudyara kweBulgaria uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeBulgaria
Maitiro Ekubvumirwa kweBulgaria
Kwekugara kwenguva pfupi muBulgaria
Permanent Residence muBulgaria
Embassies uye maCommulates eBulgaria
Ugari neInvestment muBulgaria uye Mamwe masevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma mamwe masevhisi atinopa muBulgaria kune izvozvi kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuenda kuBulgaria nekudyara mari, isu semumwe wako kuBulgaria, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muBulgaria nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kweBulgaria, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muBulgaria, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eBulgaria ichitigadzira one-stop shop yeBulgaria uye nyika dze106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye mabhizimusi eBulgaria mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweBulgaria nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye vakasungwa muBulgaria nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muBulgaria kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muBulgaria yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muBulgaria
Chero ani investor anotamira kuBulgaria angazoda account yako yebhangi muBulgaria uye account yebhangi yekambani muBulgaria, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment gedhi muBulgaria
Kana iwe uchida kubvunza muBulgaria, ye mhinduro dzemadhijitari muBulgaria senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muBulgaria kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Bulgaria kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muBulgaria kutanga pakarepo muBulgaria.
HR Services muBulgaria
Our kambani yevashandi muBulgaria inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muBulgaria vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeBulgaria
Bhizinesi foni masystem eBulgaria pamwe ne nhamba dzeBulgaria Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muBulgaria
Accounting, kushingairira kwakakodzera muBulgaria uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muBulgaria
Setup bhizinesi muBulgaria
Mushure meCitizenship nekudyara kuBulgaria, setup bhizinesi mu Bharugeriya.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muBulgaria
Kugadzira Webhu muBulgaria
Ecommerce Kuvandudza muBulgaria
Webhu kuvandudza muBulgaria
Kuvandudza kweBlockchain muBulgaria
App Kubudirira muBulgaria
Software Kubudirira muBulgaria
Magweta e Citizenship neInvestment muBulgaria
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeBulgaria uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuBulgaria, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeBulgaria ine vamiririri vekupinda zvakanaka muBulgaria, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeBulgaria ne kujekesa nzira dzekudyara dzekugadzirisa vanhu veBulgaria nemhuri dzavo. Hedu Citizenship neinvestment timu yeBulgaria inopa zvakagadzirwa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara muBulgaria, pane yako mvumo yekugara muBulgaria inogamuchirwa.
Simba regweta reBulgaria rinodikanwa kune ese matanho emutemo pachinzvimbo chako ne Citizenship nevamiriri vekudyara muBulgaria. Kana iwe uri muBulgaria kana waronga kushanyira Bulgaria, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani yeBulgaria iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeBulgaria. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weBulgaria.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muBulgaria
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muBulgaria?
Kugara nekudyara kuBulgaria, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara muBulgaria kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBulgaria kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuBulgaria, kugara nehurongwa hwekudyara kweBulgaria. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kweBulgaria, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muBulgaria, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muBulgaria uye kugara kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuBulgaria, vachishanda munzvimbo yakanakisa yekugara nevamiririri vezvekudyara muBulgaria, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muBulgaria.
Kugara nemabasa ekudyara kweBulgaria | Kugara nevamiriri vezvekudyara muBulgaria | Kugara nemagweta eInvestment muBulgaria | Kugara nemagweta ekudyara muBulgaria | Kugara nevanoona nezvekudyara kweBulgaria
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muBulgaria?
Ugari nekudyara kuenda kuBulgaria, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweBulgaria kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBulgaria kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muBulgaria. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuBulgaria, ugari nehurongwa hwekudyara kweBulgaria inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kweBulgaria, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muBulgaria, ugari hwakanakisisa nemagweta ekudyara muBulgaria uye nehugari hwakanakisa nevanoona nezvekudyara kweBulgaria. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muBulgaria, uye akanakisa mafemu ekubvunza vanoenda kune dzimwe nyika muBulgaria.
Affordable Investor yekufambisa mabasa eBulgaria | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira muBulgaria | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muBulgaria | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muBulgaria | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muBulgaria | Affordable immigration law firms kuBulgaria
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muBulgaria?
Yechipiri pasipoti muBulgaria, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weBulgaria kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBulgaria kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuBulgaria, yechipiri pasipoti chirongwa cheBulgaria inotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi eBulgaria, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirose muBulgaria, magweta echipiri epasipoti muBulgaria uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eBulgaria, vachishanda pane vechipiri pasipoti vamiririri muBulgaria, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muBulgaria.
Chechipiri pasipoti masevhisi eBulgaria | Chechipiri pasipoti vamiririri muBulgaria | Yechipiri mapasipoti magweta muBulgaria | Yechipiri mapasipoti magweta muBulgaria | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuBulgaria
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muBulgaria?
Ndarama vhiza muBulgaria, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeBulgaria kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBulgaria kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuBulgaria, chirongwa chendarama vhiza yeBulgaria inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi eBulgaria, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe visa magweta muBulgaria, akanakisa egoridhe vhiza magweta muBulgaria uye akanakisa egoridhe visa varairidzi veBulgaria, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muBulgaria, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa mafemu muBulgaria.
Goridhe visa services yeBulgaria | Ndarama vhiza vamiririri muBulgaria | Magoridhe egweta magweta muBulgaria | Magoridhe vhiza magweta muBulgaria | Goridhe vhiza varairidzi veBulgaria
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muBulgaria?
Kashoma kudyara kweCitizenship nekudyara muBulgaria iri EUR 1,024,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuBulgaria kweCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muBulgaria uye vamiririri muBulgaria vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muBulgaria.
Ugari neInvestment kuBulgaria inodhura?
Mutengo weUgari neInvestment kuBulgaria uye Citizenship nemari inodiwa mari yeBulgaria ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeCitizenship neInvestment kuenda kuBulgaria, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuBulgaria kana investor visa kuBulgaria?
Ugari nevekudyara masevhisi anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuenda kuBulgaria kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuBulgaria kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeBulgaria
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuBulgaria
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeBulgaria
Zvakatipoteredza uye Ministry yemvura
Ehupfumi, Energy uye Tourism Ministry
Hurumende yeRepublic of Bulgaria
Zvekurima uye Zvekudya Ministry
Dunhu roKubudirira uye Ruzhinji rweMabasa Ministry
Basa Rezvemitemo uye Ministry of Ministry
Dzidzo, Vechidiki neSainzi Ministry
Dzidzo Yekunyama uye Hushumiri hweMitambo
Zvokufambisa, Ruzivo rweTekinoroji uye Ministry of Tourism
Link to Dhipatimendi Rekupinda muBulgaria , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muBulgaria